गजेन्द्रपछिको गणतन्त्र : सान्दर्भिकसत्य
अहिले देश गणतन्त्रमा रुपान्तरित भै सकेकोछ । लोकतान्त्रिक शासन अन्तर्गत सातवटा संघीय संरचनामा देशको विभाजन भएकोछ । गणतन्त्र नेपालको संविधानमा सबै कुरा स्पष्ट लेखिएपनि अहिले संघीय सरकार प्रदेश सरकारको शक्ति छिमल्न लागेको छ । दुइतिहाइ वहुमतको अभिमान प्रदर्शितगर्दै सरकारले प्रदेशको अधिकारमा लगाम लगाउने काम गरी रहेको आरोप संघीय शासनका पक्षधरहरुले लगाइ रहेका छन । संघीय सरकारले संबिधानको धारा ९ मा रहेका प्रावधान विपरित ७५३ वटा स्थानीय निकायलाई कुनैपनि कानून बनाउनु अघि केन्द्रिय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने निर्देशन दिएकोछ ।संघीय सरकारले खासगरेर दुई नम्बर प्रदेशमाथि अधिकारको अनाधिकार प्रयोग गरेको आरोप अप्रत्यक्ष ढंगले लगाएकोछ । संघीय सरकारसंग अनुमति नलिइ विदेशी राजदूतावास र सहयोग नियोगहरुसंग सम्वन्ध राखेको आरोप लगाएकोछ दुइ नम्बर प्रदेश सरकार बिरुध्द । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय पदाधिकारी र निर्वाचित सदस्यहरु प्रदेश सरकार बिरुध्द तानाबाना बुन्न संघीय सरकारका पक्षमा सक्रिय हुन थालेका छन । प्रदेश सरकार यो बिषयमा संघीय सरकारसंग विवादमा पसेको देखिएको छैन । दुइ नम्बर प्रदेशसंग बाँकी नेपालको सम्बन्धमा ल्याउन खोजिएको जटिलता आजको मात्रै समस्या होइन ।
मधेश राजनीतिको बिकासक्रममा मधेशका मसीहा मानिनुहुने सदभावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंहसंग मैले २०४४ असोज ४ मा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ । यो अन्तर्वार्तामा नेता सिंहले उठाउनु भएका प्रश्नहरुको सान्दर्भिकता अहिलेसम्म पनि उत्तिकै छन । यो अन्तर्वार्ताले हाम्र्रा पाठकहरु र मधेश राजनीतिमा रुचिराख्ने सबैका लागि मधेशको समस्या ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझन र अहिलेसम्मका उपलव्धिहरुको मूल्यांकन गर्नउपयोगी हुनेछ ।
यो अन्तर्वार्ता लिएको समयमाराष्ट्रिय पंचायतको चुनाव भर्खरै सम्पन्न भएको थियो । पन्चहरुको मांग अनुसार चुनाव निष्पक्ष सम्पन्न गराउन राजा बीरेन्द्रले नागेन्द्रप्रसाद रिजाललाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीबनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा भाग लिन नदिने कुत्सित खेल थियो यो चुनाव । प्रधानमन्त्री रिजालसंग कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टरार्ई र महामन्त्री गिरिजाप्रसादको वार्तापछि कांग्रेस चुनाव वहिष्कारको पक्षमा लागेको थियो । चुनावमा गजेन्द्रनारायण सिंह लगायत चुनाव बहिष्कारको पक्षमा नरहेका बहुदलवादी–सुधारवादी विपक्षीहरु बिजयी भएका थिए ।
त्यतिबेला राजाले राष्ट्रिय पन्चायतको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री पदमा स्व.मरीचमान सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए । सिंहको नियुक्ति रापंको सिफारिशमा भएको बताइएपनि उनको चयन राजाबाटै भएको थियो ।सिंहलाई पन्चायतभित्र हार्डलाइनर र वामपन्थी पृष्ठभूमिका बताइन्थ्यो । मधेश राजनीतिका समस्यामा मरीचमान सिंह सरकारको दृष्टिकोण र प्रभावकारिताको बिषयमा त्यतिबेला थुप्रै प्रश्न उठेको थियो । अहिले पनि कुरा त्यसरी नै उठेकाछन । मधेश समस्या समाधानका लागि सरकार कति अगाडि बढेको छ अथवा छैन ? प्रश्नहरु उस्तै छन ।
तत्कालीन समयमा विवादहरुको निष्कर्षसंग सम्बन्धित प्रश्नमागजेन्द्रबाबूको उत्तर थियो–– “हो, जति हुनुपथ्र्यो थियो, त्यति हुन सकेको छैन । विपक्षीर सरकार पक्षीय दुवैथरि रापसको ध्यान तस्करहरुमा मात्रै केन्द्रीत रहेकाले विशेष केही हुन नसकेको हो । मेरा लागि वा म जसरी सोच्ने अरु सदस्यहरुको लागि महत्वपूर्ण कुरा ः राष्ट्रिय पञ्चायतकै इतिहासमा पहिलो पटक नागरिकता र वर्क पर्मिट सम्बन्धी प्रस्ताव आयो । प्रस्तावमा छलफल भयो । नागरिकता प्रमाणपत्रको वितरणको समस्यालाई लिएर २८ जना सदस्यहरुले आ–आफ्नो विचार प्रकट गरे । ती २८ जना सदस्यले नागरिकताको समस्यालाई नसुल्झाइ वर्कपर्मिट लागु गर्न खोजियो भने खास गरी तराई क्षेत्रका नागरिकहरुलाई मुस्किल पर्छ भन्ने कुरा गरे ।
राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्ताव आउने वित्तिकै नागरिकता समस्या सुल्झिन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?
प्रस्ताव आउने वित्तिकै समस्या निश्चय पनि सुल्झिदैन । यसको लागि त सरकारको नियत साफ हुनुपर्छ । नागरिकहरुले सहूलियत ढंगबाट कसरी नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्छन् यसमा कानुनतः के के त्रुटिहरु छन् ? त्यो हेर्नुपर्छ । मैंले गृहमन्त्रीको च्याम्बरमा छलफल हुँदा पनि यो कुरा भनेको थिएँ । नेपालको जनसंख्या एक करोड पचहत्तर लाख भएको कुनै प्रमाण रेकर्ड छ भने त्यो आधारमा नागरिकता वितरण हुनुपर्छ । होइन भने देशको राजनीतिक भाग्यको फैसला गर्न गरिएको २०३७ सालको जनमत संग्रहको मतदाता सूचिलाई आधार बनाएर नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ । जुन भोटर लिस्टको आधारमा देशको राजनीतिक भाग्यको फैसला गरियो त्यसमा विदेशीहरु पनि भोटर छन् भन्ने कुरा म मान्दिन ।
अर्थात तपाई जनमत संग्रहको मतदाता सूचीलाई नागरिकता वितरणको आधार बनाउन चाहनुहुन्छ, होइन त ?
हो । म त्यही मतदाता सूचीलाई आधार बनाउन चाहान्छु । किनभने त्यसमा मेरो नाउँ छ भने मेरो छोरोले पनि सजिलै नागरिकता पाउन सक्छ ।
तपाईले नागरिकता र तराईबासीहरुसँग बाँकी नेपालको भेदभावको प्रश्न बारम्बार उठाउँदै आइराख्नु भएको छ । तपाईलाई के लाग्छ योसुल्झिन सक्ने समस्या हो ?
यो जटिलता...ये प्रशासन के लोग है न...सी.डी.ओ.हरुको क्रियाकलाप र काम गर्ने ढंगले गर्दा बढ्न गएको छ । हामीले दिएको सुझावलाई सरकारले मानिदियो भने यो जटिलता कम हुन्छ । श्री ५ को सरकारको मनमा यो पसेको छ कि जनमत संग्रहपछि तराई क्षेत्रमा धेरै भारतीयहरु घुसेका छन् ।
तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन?
भारतीयहरु या और कोही विदेशीहरु जो आएका छन्, तीनको संख्या कति होला ? यहाँ नेपालमा के ‘स्कोप’छ र विदेशीहरु आउन ? केही नेपालमा स्मग्लिङ्ग गर्न पाइन्छ भनेर आएका होलान्, त्यत्ति न हो । यसरी बस्न आउने स्मगलरहरुले नागरिकता पनि सजिलै पाएका छन् । तर अरु मानिस किन आउने ?अहिले नै हेर्नुहोस, उसपारि बाढी आयो । बाढीग्रस्त क्षेत्रका मानिसलाई खुवाउन उसपारिको सरकारले हेलिकप्टरमा खाना ल्यायो । बाढी त यहाँ पनि आयो । के हामीले ती बाढीपीडितहरुलाई कुनै प्रकारको सेवा दिएका छौं ? वहाँको मान्छे यहाँ किन आउँछ ? वहाँका मान्छेले काम पाइरहेका छन् भने यहाँका मान्छेले काम पाइरहेका छैनन् । यहाँका मान्छे काम गर्नका लागि पंजाव, हरियाणा, असम पुगिराखेका छन, उताको मान्छे यहाँ के लिन आउँछ ?
भारतीय आउँदैनन् भन्ने तपाईको भनाई....
इक्का दुक्का मानिस नआएका होलान म भन्दिन । तर, ठूलो संख्यामा वा सामूहिक रुपमा नेपालमा भारतीयहरुको प्रवेश भइराखेको छ भन्ने म मान्दिन । नेपालबाट पहाडका मानिसहरु असमतिर लागेका थिए । किन ? कामको खोजमा । नेपालका तराईका मानिसहरु कामको खोजमा पंजाव जान्छन् र राम्रो काम पाए भने त्यहीं घर बनाएर बस्छन् । हाम्रा यताका मानिस गएर उताबाट पानी तान्ने पम्पिङसेट किनेर ल्याउँछन्, रु ४०००÷५००० मा । यहाँ के पाउँछन् ? मैले भने भारतमा ‘स्कोप’ छ । मैले भारतको पक्ष लिएको होइन । आफ्नो पक्ष लिएको हुँ । बेरोजगारको संख्या तराईमा बढी छ ।गैर नेपाली भाषा–भाषीहरुमा यो समस्या अझै बढी छ ।
तपाई लामो समयदेखि तराईका मानिसहरुसँग नेपालमा भेदभाव गरिएको छ भन्दै आउनुभएको छ । तपाईसँग यसको के आधार छ ?
गोरखापत्रमा लोकसेवा आयोगको परीक्षाको परिणाम प्रकाशित हुँदा तपाई हेर्नुहोस त्यसमा तराईका मानिस कति पास हुन्छन् । त्यसलाई गौरसँग पढेर भन्नु होस–तराईका मान्छे हुन्छन् कि हुँदैनन् ?तराईका मानिसले लोकसेवा पास गर्न नसक्ने कारण भाषागत कठिनाइ हुनसक्छ । म राष्ट्रभाषा नेपालीको विरोधी होइन । तर मैले क्षेत्रिय भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउने वित्तिकै मलाई राष्ट्र भाषा विरोधीको संज्ञा दिइएको छ । जलेश्वरमा गिरफ्तार भएपछि सि.डि.ओ.अफिसमा बयान लिन लगियोे । त्यहाँपनि मलाई यस्तै कुरा सोधियो–तपाई भेदभावको कुरा गर्नुहुन्छ । के संविधानमा त्यस्तो भेदभाव छ ? म भन्छु–भेदभाव संविधानले होइन, ब्यवहारले गरेको छ । शाही सेनाकै कुरा गर्नुहोस भर्तीको बेला के हुन्छ मलाई थाहा छैन् । तर मैले तराईबासीलाई शाही सेनामा देखेको छैन । हिन्दुस्तानमा यस्तो हुँदैन । हिन्दुस्तानको संविधानले सबै नागरिकलाई बराबरको हक दिएको छ । मुसहर, बाँतर, चमार सबैले समान अवसर पाएका छन् । व्यवहारमा कसैसँग पनि भेदभाव गरिंदैन । तर यहाँ त्यसो भइराखेको छ । एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन कुनै नेपाली भाषा–भाषी सी.डि.ओ. कार्यालयमा जाँदा तीन घण्टामा होइन, तीन महिनामा होइन छमहिना सम्ममा पनि पाउन सकिंदैन । यसको असर माथिसम्म पर्दछ । श्रीलंकाको समस्याको प्रारम्भ नागरिकताकै समस्याबाट भएको हो । अब हेर्नुहोस त्यहाँ हेर्दाहेर्दै के भएको छ ? तराईबासीको मनमा आफूप्रति भेदभाव गरिंदैछ भन्ने ‘भ्रम’ छ भनिन्छ । यसलाई म भ्रम भन्दिन । यो यथार्थ हो ।
के तपाई यो मान्नुहुन्छ तराईबासीहरु मुख्य धारबाट काटिएका छन् ?
यो सच्चाई हो । यो सच्चाई म, गजेन्द्र नारायणसिंह सिवाय अरु कोही पनि भन्न चाँहदैनन या भन्न डराउँछन्–किनभने कसैलाई पदको लोभ छ, कसैलाई केही कुराको भय छ, त्यो सब कुरा मलाई छैन । कुनै उच्च पदमा बसेको तराईबासी पदाधिकारीको कुनै छोरा बेरोजगार छ र घरमा खान पुग्ने आय छैन भने त्यहाँ पनि प्रसंगबस बेरोजगारीका कारण आफू तराईबासी भएको हो भन्ने कुरा चल्छ ।
जो बडे लोग है उनकी बातें कुछ भिन्न भी हो सकती है । तर, आज त्यो स्थिति छैन, जो अघि थियो । अहिले तराईबासीहरु ब्यापक रुपमा शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्–तिनीहरुका मनमा जुन असन्तुष्टि छ, त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन । तराईबासीहरु प्रति हुने भेदभावले भोलि, त्यो वर्ग, जो पढेर लेखेर बेरोजगार हुँदै जान्छ, केमा लाग्छ ?त्यति बेलाको स्थिति सोच्नुहुन्छ ? चूँकि म त राजनैतिक पैदायस हूँ । मेरो धारणा के हो भने जो कुराहरु हामी गरिरहेका छौं–यी पक्षहरुलाई राष्ट्रिय मुख्य धारहरुसँग सम्बद्ध पारेर, भोली त्यो स्थिति जन्मिन नदिऔं ।
सबैभन्दा पहिला नेपालका तराईबासीहरुसँग सद्भावना राख्नु पर्दछ भन्ने माग तपाईले राख्नुभएको थियो । तपाईको त्यो सदभावना आन्दोलनले राष्ट्रविरोधी आन्दोलनको रुप लिइरहेको आरोप लगाइएकोछ...
कहाँ लिएको छ ?
आतंकवादीहरुले त्यसैलाई प्रेरणा मानिरहेछन् ।
देशभित्र बम विस्फोट गराएर आतंक मच्चाउनेहरुले भेदभाव र सदभावको कुरा गरेको सुन्नु भएको छैन?
बमकाण्ड हुँदा त्यसको १० दिन अघि नै मलाई गिरफ्तार गरेर ल्याइएको थियो । बमकाण्ड गर्ने आतंकवादीहरु त मलाई नै उल्टो गाली गर्दछन्–मैले तराईबासीहरुको माँग राखेर उनीहरुको आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याई दिएँ । मैले तराईको बारेमा कुरा उठाउँदा म माथि देश तोड्न खोजेको आरोप लगाइयो । वास्तवमा म माथिको यो आरोप गलत हो ।
भारत सरकार नेपालमा भारतीय छन भन्छ,तपाई छैनन भन्नुहुन्छ ।
भारतले नेपाल हाम्रो प्रान्त हो भन्यो भने तपाई मान्नुहुन्छ ? उनीहरुले भने भन्दैमा जसरी तपाई स्वीकार गर्नुहुन्न म पनि स्वीकार गर्दिन । भारतीयहरु छन् भने कहाँ छन् ? तराईको जनसंख्या ८० लाख छ । यी मध्ये सबै नेपाली हुन् भने कहाँ छन् त भारतीय ? तराईमा बस्ने ८० लाख नेपाली मध्ये पहाडिया पनि छन्, आदिवासी, थारु, मुसहर, चमार, बाँतर पनि छन् । यो सबै कटाएर मूल तराईबासी १५÷२० लाख मात्र छन् ? मै भारतवाले से पुछुंगा वे वतादे कि वे भारतीय कहाँ है ?श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहबाट नेपालको एकीकरण हुनुभन्दा अघि देखि नै तराईबासी छन् । उनीहरु उपेक्षित छन् । मूल धारामा मिल्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई मिलाउनुपर्छ भनेर नै मैले आवाज उठाएको हुँ ।
अर्थातः तपाई भन्नुहुन्छ : नेपालको भावनात्मक एकीकरण भएको छैन?
जुन भावनाले देशको एकीकरण भएको थियो, श्री ५ का सरकारका पदाधिकारीहरुको व्यवहारले त्यसलाई कुण्ठित तुल्याएको छ भन्ने मेरो भनाई हो । तराईबासीहरु भावनात्मक रुपले एक हुन लडिराखेका छन्, जुधिराखेका छन् । उनीहरुका भाषागत कठिनाईहरु छन् ।उनीहरु उपेक्षित छन् । मेरो भनाई यत्तिमात्रै हो ।